Sidee U Maaraysaa Mushkiladaha? - Daryeel Magazine
Sidee U Maaraysaa Mushkiladaha?
side ula macaamaloonaysaa mushkiladaha ?
Xusuunow iska dhega tirka mushkiladaha iyo xal u raadin la’aanteeda in ay horseedayso mowqifka uu sii adkaada iyo mushkiladihiiyoo kuwa kale oo badan sii dhalaan.
Xaddid mushkiladaha aad doonayso inaad xalisida adiga oo u dhaqaaqaya xallinteeda, waxaadna ogaataa in mushkiladda si wanaagsan loo gartaa ay tahay midda la doonayo in la garto halka ay ku wajahan tahay.
Waa in aad xaddiddaa waxyaabaha lagu xalin karo iyo waxyaabaha caqabadda ku noqon kara oo hadhow saameyn ku yeelan karto mushkiladda aad doonayso in aad xalisid.
Waa in aad xaddiddaa barnaamijkaaga ah waxa caqabadda ku noqon kara xallinta mushkillada . Isla markaasina qof masuul uga dhigaya uuna kaaga kaaga soo gudbiyo qoraal faahfaahsan oo ku saabsan arrinta jirta.
Balaari la tashiyada aad samaynayso, waana in ay ahaataa mid xaddidan adiga oo markaasi u kuur galaya ogaanshaha waxa sababay mushkiladda mushkiladda.
Ku dadaal macluumaadkii aad soo ururisay in ay yihiin kuwa ku salaysan xaqiiqda oo aan qofna lagu dulminaynin.
Si waadax oo kooban u qor mushiladii kaa soo wajahday dhinaca shaqada.
Isku day in aad si fudud u kala saartid mushkilada iyo waxa muuqda adiga oo markaasi adeegsanaya xirfaddaada iyo mowqif markaasi kaa dalbanaya in aad go’aan qaadatid.
Ururi macluumaadka mushkiladda ku hortaala, waxaadna ogaataa in macluumaadku uu yahay awood.
Qore: Al-Ustaad Mohamed Ali Juhaa
Sidee Caruurtaada Uga Ilaalin Kartaa Inay Beenta Bartaan? Sidee Ula Dhaqmaysaa Qofka Ku Gooya Ama Ku Diida? Sidee Caado Loo Dhigtaa Wax Akhrinta? Sidee Se La isku Jeclaysiin Karaa? Sidee Ku Aaminaa Nafteyda?